Mayelana NATHI - IQuanzhou Stamgon Trading Co, Ltd.
Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd. ubelokhu enza ibhizinisi lezindwangu ukusukela1993. Imikhiqizo yethu ifaka phakathi izikhwanyana zasolwandle, izembatho zokugqoka kanye nokugqoka kwe-Yoga njll. Izimakethe zethu eziphambili zitholakala emazweni ase-Europe, North America, South pacific kanye naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Sinezimboni eziyisikhombisa zokusebenzisana ezinabasebenzi abangaphezu kwamakhono abangama-2300. Umphumela wethu wokukhiqiza ungafika ezigidini ezingama-US ezingama-20 ngonyaka.
Sinesikhathi eside sibambisana kakhulu namakhasimende afana neZara, iK-makemakethe, njll. Samukela ngokweqiniso abangane abavela kuwo wonke umhlaba ukuthi bavakashele ifektri yethu futhi baxoxe nathi ngebhizinisi. "Ngokuphathelene nawo wonke amakhasimende njengoba ebaluleke kakhulu, ukunikeza insizakalo engcono kakhulu kumakhasimende" yindawo yethu. Sizohlala sithola ukubambisana isikhathi eside futhi sinethemba lokuthi singabalingani abahamba phambili nani.
Ekuqaleni kokusungulwa kwale nkampani, isisungule ithimba labaphathi bobuchwepheshe elisebenza kahle futhi elinobuchule, yasungula uhlelo oluphelele lomsebenzi wokukhiqiza, futhi yatshala imali kakhulu ekwethuleni izintambo zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme, imishini yokusika ezenzakalelayo, imishini yokusabalalisa neminye imishini ehamba phambili. Kulezi zinsuku, imishini yokuthunga izingubo ehlukahlukene kanye nezinsizakalo zokuphrinta zokutholwa zitholakala kalula. Kunemigqa yemihlangano emi-6 ejwayelekile, imishini engama-36 yenalithi ekhethekile nemishini ekhethekile enezingcingo eziyisithupha, okuphuma njalo ngenyanga kwezingcezu ezingaphezu kuka-200,000.
Ifektri yethu inabachwepheshe abangaphezulu kuka-180, futhi i-QC enolwazi olunolwazi ekubhekeni ngesikhathi sokukhiqizwa okuphakathi nangaphambi kokuthumela, qiniseka ukuthi igcina ikhwalithi ephezulu yamakhasimende.
Ukuze sisekele ama-oda amancane avela e-Amazon noma abanye abathengisi abancane, silungiselele isitokwe esanele sawo wonke ama-design endalini angahanjiswa zingakapheli izinsuku eziningana, sikwamukela ngemfudumalo ukuthi uvakashele inkampani yethu ukuze uqhubeke nokuxoxa ngebhizinisi uma kungenzeka.
UCarlon Fair (30 / 04-3 / 05)
Umbukiso Womlingo (4 / 2-7 / 2)
Umbukiso we-ISPO (2 / 86-01 / 07)
Ukuvakasha Kwamakhasimende e-USA